Militariga Lubnaan oo raashiin iyo saanad looga yaboohayo caalamka | Biyoguurenews.com
Home Wararka Militariga Lubnaan oo raashiin iyo saanad looga yaboohayo caalamka
Askariga aan darajo lahayn ee milatariga Lubnaan ayaa mushaarkiisa waxaa lagu qiyaasay 1.2m oo giniga lubnaan ah bilwalba taas oo u dhiganta $800 (£574)
Milatariga Lubnaan ayaa kaalmo weeydistay quwadaha adduunka si looga caawiyo inay ka badbaadaan burburka dhaqaale ee dalkaasi, oo ciidamada baday gaajo iyo silic.
Lacagta giniga Lubnaan ayaa boqolkiiba 90% hoos u dhacay sanadkii 2019kii arrintaas oo horseedday in mushaharaadka iyo dhaqaalaha ku baxaya milatariga ay meesha ka baxaan.
Shir deeq-bixiyeyaasha isugu imanayaan oo uu martigelisnayo Faransiiska ayaan lagu codsan doonin dhaqaale balse waxaa la doonaya in laga codsado dalalka deeqda bixiya inay milatariga siiyan cuno, shidaal, daawo iyo agabyada lagu dayactiro hubka iyo gaadiidka.
Ciidanku waa mid ka mid ah hay’adaha dalkaasi ee fara ku tiriska ah ee loo arko inuu yahay astaan Lubnaan mideysa islamarkaasina oo xasiliya dal dadkiisu ay aad u kala qaybsanyihiin.
Waxaa uu caan ku yahay dhex-dhexaadnimadiisa waxaa uuna taageero ballaadhan ka haysta dhammaan 18-ka urur diimeed ee dalkaasi la aqoonsan yahay, iyo sidoo kale kooxaha siyaasadeed.
Quwadaha reer galbeedka ayaa sidoo kale u arka ciidanka inuu yahay awoodda keli ee celinaysa dhaqdhaqaaqa Shiicada Islaamiyiinta xagjirka ah ee ay taageerto Iran, ee Xisbullah, kuwaas oo diiddan in hubka ay dhigaan.
“Milatariga Lubnaan waa tiirka keli ee sugayo amniga sidoo kalena illaalinaya in amniga dalka , marka waa in si degdeg ah loo taagero si ay howlgaladooda ay u fuliyan,” waxaa sidaasi wariyasha u sheegay sarkal ka tirsan wasaarada gaashandhigga ee farasiika
Faransiiska ayaa abaabulay shirkii deeq-bixiyeyaasha ee khamiistii ka dib markii taliyaha ciidamada Lubnaan Jeneraal Joseph Cawn uu bishii maarso shaaca ka qaaday “inay askartiisa silicsanyihiin oo ay u gaajaysan yihiin sida dadka kale”.
Waxaa uu si cad u dhaleceyay hoggaamiyaasha siyaasadda Lubnaan kuwaas oo ku guuldareystay inay dowlad wadaag soo dhisan kadib markii Ra’isal wasaarihii ku meel gaarka ahaa Xasan Dhiyaab uu iscasilay, taas oo ka dambeeysay markii qaraxii dekkeda Beirut uu dhacay bishii Agoosto ee sanadki hore. ”halkeen u socona? Maxaad damacsantihin inaad sameysan?” ayuu isa su’aalay taliyaha.
Khudbad uu talaadadi jeediyay ayaa Jeneraal Cawn uu ku yiri ” waxay danta nagu qasabtay inaan kaalmo weydiisano dalalka aan iskaashiga nahay , waxaana diyar u ahay in aan booqdo mesha dunida ugu dambeyso si milatariga uu cagahiisa ugu istaago.”
Wakaalada wararka ee AFP ayaa soo xigatay ilo wareedyo ka ag dhaw wasiirka difaaca ee Faransiiska kaas oo sheegay in Milatariga Lubnaan ay waxyaabo waxyaabaha daruuriga ah, sida caanaha, burka, daawoyinka , shidaal iyo adeegyada qalabka ee saanad milatari.
Dowladda Maraykanka ayaa bishii aynu soo dhaafnay waxay sheegtay inay kordhin doonto dhaqaalaha taakulaynta Milatariga Lubnaan oo ay gaarsin doonto $120m.
Bangiga Adduunka ayaa ka digay in Lubnaan ay wajahayso xaalad dhaqaale tii ugu xumeyd tan iyo qarnigii 19aad.
In kabadan kala bar bulshada dalkaasi Lubnaan ayaa la rumeysanayahy inay ku nool yihiin wax ka hooseeya heerka saboolnimada ee waddankaas, arrintaas oo saameyn ku yeelatay noolasha shacabka iyo adeegyada aas’aasiga ah.
Askariga aan darajo lahayn ee milatariga Lubnaan ayaa mushaarkiisa waxaa lagu qiyaasay 1.2m oo giniga Lubnaan ah bil walba taas oo u dhiganta $800 (£574) ee sarifka rasmiga ah ee caalamka balse suuqa madow ee dalkaasi ayaa markii lacagtaasi la fiiriyo waxay noqonaysa $80 doolar.
Arrintan ayaa niyad jebisay askarta waxayna sababtay in tirada ciidanka ay hoos uga dhacdo wax ka badan 3000 kun iyadoo haatan tirada guud ay haatan tahay 80,874 oo askari.
Previous articleBERBERA Gudoomiyaha Kaluumaystada berbera oo kahdlay dhibatooyin haysta xiliyada xagaaga
Next articleLiibiya: Qasrigii duulayay ee Qadaafi oo dib loo soo celiyay